Hiran State - News: Hogaamiyaal sare oo ka tirsan Al Shabaab oo maanta lagu arkey xaafada wardhiigley.
Hogaamiyaal sare oo ka tirsan Al Shabaab oo maanta lagu arkey xaafada wardhiigley.
HS:-Hogaamiyaal sare oo ka tirsan Al Shabaab oo maanta lagu arkey xaafada Wardhiigley, Kadib markii la sheegay iney heshiis hoose la galeen Shariifka.
Wararka inaga soo gaaraya caawa magaalada Mogdisho ayaa sheegaya in inta badan hogaamiyaasha Shabaab gudaha Mogdisho ku sugan yahiin iyadoo qaarkood maanta lagu dhex arkey xaafado ka tirsan Mogdisho.
Wararku waxey sheegayaan in guriyo ku yaala xaafada Wardhiigley ay shacabku sheegeen iney ku arkeen muuqaalka saraakiil sar sare oo ay shegeen inuu ku jiro Hasan Daahir Aweys iyagoo sii galaya guri u dhaw Suuqii hore ee xoolaha degmada wardhiigley iyadoona halkaasi loo maleynayo inuu dejiyey Shariifka maadama xaafadaas tahay mid gacanta ugu jirta ciidamo taageersan TFGda.
Warku waxuu intaas ku darayaa in masuuliyiin ka tirsan wasaarada arimaha gudaha ay qeyb ka tahay howshaasi amaba xarunta Villada laga ogyahay hogaamiyaashaasi ku sugan halkaasi oo laga yaabo iney isla caawa ka baxaan oo kulan deg deg ah halkaasi kula yeeshaan rag TFGda ka socda.
Maalmahii ugu danbeyey ayey wararku sheegayaan in Shariifka ciidamo boqolaal ah oo ka tirsan Shabaab ku heysto gudaha Mogdisho taasi oo laga yaabo in ay waardiyo ka yahaan hogaamiyashaan. dhinaca kale dowlada Kenya ayaa wacad ku martay si ay u xaqiijiso nabadgalyada dalkeeda iney Shabaab kula dagaali doonto gudaha dalkeeda iyo Somaliyaba.
Warar hada inaga soo gaaray dalkaasi Kenyana waxey sheegayaan in Shiikh Shariif iyo C/wali Gaas looga yeeray halkaas iyadoo ay beesha caalamku doonayan iney Shariifka ku weydiiyaan su,aalo ku saabsan mowqifka uu ka taagan yahay Shabaab.
Dowlada kenya ayaa maanta ku guuleysatay iney hakiso maraakiib doonayey iney ku xirtaan dekeda Kismaayo kuwaasi oo dib u celiyey iyaga iyo badeecadii ay wadeen. Shabaab ayaa la sheegya hadii laga xiro dekeda Kismaayo iney ku adkaaneyso sii joogitaanka Jubooyinka.
Bulshada Somaliyeed ayaa u muuqda kuwo dhibaato guud kala kulmaya Shabaab iyo qaar ka mid ah hogaanka sare TFGda oo xiriir hoose la hel ururkaas.
la soco wararkena danbe.
· admin on October 26 2011 19:55:23 · 0 Comments · 2164 Reads ·
14,605,943 unique visits